कोरोनाबाट कसरी जोगिने ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन नेपालले पनि केही तयारी गरेको छ । सरकारी तहमा गरिएका केही महत्त्वपूर्ण निर्णय र आग्रह आमनागरिकले पालना गरे कोरोनाको प्रकोपबाट धेरै हदसम्म जोगिन सकिन्छ ।
यस संक्रमणलाई ‘आयातित संक्रमण’ का रूपमा पनि हेरिएको छ । नेपालमा पनि चीनबाटै फर्किएका एक युवकलाई यसको संक्रमण देखिएर निको भएको थियो । तसर्थ स्वदेशमा रहेका भन्दा विदेशबाट आएका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक अलिकति सतर्क भएमा संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
सबैभन्दा पहिलो कुरा त विदेशबाट नेपाल आएकाहरूले होम वा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्नुपर्छ ।
सरकारी संयन्त्रले अनुगमन गरेको छैन वा थाहा पाउँदैन भनेर क्वारेन्टाइनमा नबस्नु भनेको सबैभन्दा पहिले आफू र आफ्नो परिवारलाई संकटमा पार्नु हो । यात्रा गर्दा कोरोनाबाट संक्रमित भए पनि त्यसको लक्षण नदेखिन सक्छ । त्यसैले, क्वारेन्टाइनमा बस्नु सबैका लागि हितकर हुन्छ किनभने सुरुमा संक्रमणको लक्षण नदेखिए पनि १४ दिन वा त्यसभन्दा पछिसम्म संक्रमण देखिन सक्छ । त्यस अवधिमा अरूमा भाइरस सर्न सक्छ ।
सेल्फ क्वारेन्टाइन भनेको के हो र कसरी बस्ने ?
क्वारेन्टाइनमा बस्दा रुघाखोकी लागे र ज्वरो आए तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्ने । काठमाडौंमा भएको खण्डमा टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा जाँदा राम्रो ।
रुघाखोकी लाग्दैमा वा ज्वरो आउँदैमा कोरोना संक्रमण भएको ठान्नु हुँदैन । हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमित नदेखिएकाले विदेशबाट आएका व्यक्तिसँग सम्पर्क छैन भने रुघाखोकी वा ज्वरो आउँदैमा डराइहाल्नु पर्दैन तर आफूलाई लागेको रुघाखोकी अरूलाई नसरोस् भन्नका लागि घरबाहिर ननिस्किनु राम्रो ।
सामान्य रुघाखोकी र कोभिड–१९ मा के फरक ?
रुघाखोकीले बालबालिका, गर्भवती, वृद्धवृद्धा तथा पहिल्यैदेखि स्वास्थ्य समस्या भोगरिहेकालाई बढी असर गर्छ । यसले हालसम्म बालबालिका तथा गर्भवतीलाई धेरै असर गरेको देखिँदैन । त्यसैले आफू वा आफ्ना परिवारका सदस्यले संक्रमण देखिएका देशबाट फर्किएका मानिस वा तिनका परिवारका मान्छेसँग घुलमिल गरेका छैनन् भने आत्तिनु पर्दैन ।
प्रकाशित : चैत्र ८, २०७६ १०:४८
दुर्घटना रोक्न ‘टाइम कार्ड’
चैत्र ८, २०७६ ओमप्रकाश ठाकुर
सर्लाही — पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सर्लाहीको कर्मैयामा शुक्रबार बिहान पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना५ख ४३४३ नम्बरको यात्रुवाहक बसलाई ट्राफिक प्रहरीले रोकेपछि बसका चालक प्रेम श्रेष्ठ अलमलमा परे । प्रहरीले तल झर्न आग्रह गरे र साबुन पानीले मिचीमिची हात धुन लगाए ।
श्रेष्ठलाई कोरोना भाइरसबारे सचेतना होला भन्ने लाग्यो । तर, ट्राफिक प्रहरीले फूलको माला र अबिर लगाइदिएपछि सडक सुरक्षा सचेतना अभियानका बारेमा जानकारी गराए । तराईमा बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिकले टाइम कार्ड लागू र चालकलाई सचेतना अभियान चलाएको हो । यो कार्यक्रम मुलुकका अन्य स्थानमा लागू भए पनि तराईमा सुरु हुन सकेको थिए ।
‘पछिल्लो समय हामी गाडी चालकहरूलाई यात्रु चढाउन होडबाजी हुन्थ्यो, त्यसकारण प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्थ्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यात्रु चढाउनलाई गति बढाउँदा कतिपय सवारी दुर्घटनामा परिरहेका थिए ।’ टाइमकार्ड लागू भएपछि हरेक सवारीसाधन आफ्‍नै गतिमा हिँड्ने र प्रतिस्पर्धा नगर्दा दुर्घटना कम हुने उनले अपेक्षा गरे ।
महोत्तरीबाट काठमाडौं जाँदै गरेको ना६ख ९११८ नम्बरको यात्रुवाहक बसका चालक धीरेन्द्र सिंहलाई पनि ट्राफिक प्रहरीले सचेत गरे । उनले सवारीको गति नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तीव्र गतिमा सवारीसाधन चलाउँदा चालक र यात्रुको ज्यान जोखिम बढेको भन्दै प्रदेश ट्राफिक प्रहरीले टाइमकार्ड लागू गरेको हो ।
सर्लाहीमा मात्र तीव्र गतीका कारण गत साउनदेखि फागुनसम्ममा ३८ जनाले ज्यान गुमाइसकेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक छ । टाइमकार्डमा कार, जिप, पिकअप भ्यानलाई प्रतिघण्टा ८० किलोमिटर तोकिएको छ । यात्रुवाहक बस, ट्रकले भने एक घण्टामा ५० किलोमिटर मात्र चलाउन पाउनेछन् । मोटरसाइकललाई प्रतिघण्टा ५० किलोमिटर, टेम्पु, स्कुटर लगायतका सवारी साधनलाई प्रतिघण्टा ४० किलोमिटर तोकिएको छ । तोकिएको समयसीमाभन्दा कम समयमा गए ट्राफिकले जरिवाना गर्नेछ ।
ट्राफिक प्रहरीले प्रदेश दुईको भारदहदेखि लहानसम्मको ५३ किलोमिटर एक घण्टा १५ मिनेट तोकेको छ । यस्तै लहानबाट लालगढसम्म जम्मा ६९ किलोमिटरको यात्रालाई एक घण्टा ३० मिनेट तोकेको छ । लालगढदेखि कर्मैयासम्मको ५० किलोमिटरलाई एक घण्टा १० मिनेट र कर्मैयादेखि पथलैयासम्म ५२ किलोमिटरको यात्रालाई एक घण्टा १५ मिनेट तोकेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी निरीक्षक सूर्यनारायण यादवले अभियानले दुर्घटना रोक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
पर्सा – प्रादेशिक ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत प्रदेशमा पर्ने सडकखण्डमा शुक्रबारदेखि ‘टाइम कार्ड’ अनिवार्य गरेको छ । सवारीसाधनको तीव्र गति नियन्त्रण र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि टाइम कार्ड लागू गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले पथलैयामा, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कमलराज पण्डित र वीरगन्ज महानगर–२१ का वडाध्यक्ष हबिब मियाले पर्सामा लामो दूरीका २ वटा सवारीसाधनका चालक तथा सहचालकहरूलाई फूलमाला र खादा लगाई कार्यक्रमको उद्घाट्न गरेका थिए । ‘सडक सुरक्षा सचेतना अभियान’ कार्यक्रम अन्तर्गत यो अभियान थालेको महतोले बताए । चालकलाई फ्लोरोसिङ ज्याकेट र डस्टबिन पनि वितरण गरिएको छ । ‘सवारीमा अग्नि नियन्त्रक उपकरण राख्न आग्रह गरेका छौं,’ महतोले भने ।
प्रहरी निरीक्षक पण्डितले पर्सामा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नपरे पनि वीरगन्जबाट छुट्ने तथा त्रिभुवन राजपथ भएर पथलैया हुँदै पूर्व जाने सम्पूर्ण यात्रुबाहक बसको हकमा टाइम कार्ड लागू गरिएको बताए । यसको लागि परवानीपुरमा बेस स्थापना गरिएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र ८, २०७६ १०:४४